Weerarkii ugu dhimashada badnaa ee Kiimiko loo adeegsado oo ka dhacay Siiriya (Daawo Sawirro) – idalenews.com
Weerarkii ugu dhimashada badnaa ee Kiimiko loo adeegsado oo ka dhacay Siiriya (Daawo Sawirro)
Baydhabo(INO); Dad ka badan 60 ruux ayaa ku dhintay qaar kalena isbitaalada ayaa la dhigay ka dib markii weerar kiimiko loo adeegsaday uu ka dhacay magaalo ay Jabhaduhu haystaan oo ku taalla waqooyiga-galbeed ee dalka Siiriya.
Sida ay sheegeen Kooxda la socota arrimaha xuquuqda aadanaha ee Suuriya weerarka ayaa ka dhacay degaanka Khan Sheikhoun oo ka tirsan gobolka Idlib waxayna xuseen iney gaysteen dayuuradaha dagaalka Ruushka ama Suuriya, iyagoo intaa ku daray iney dad badan neef-qabatoobeen.
Haddii la xaqiijiyo in weerarkan kiimiko loo adeegsaday wuxuu noqon doonaa midkii ugu waxyeelada badnaa ee noociisa ah ee ka dhaca Suuriya tan iyo markii uu dagaalka sokeeye billawday lix sano ka hor.
Wararka ayaa intaa ku daraya weerarkan ka dib diyaarado dagaal ay duqeeyen rugo caafimaad oo lagu dawaynayay dadkii ay waxyeeladu ka soo gaartay weerarkii hore.
Dawladda Suuriya ayaa si joogto ah u diida in ay isticmaasho hub kiimiko ka samaysan balse marar badan ayaa horey loogu eedeeyey iney isticmaaleen weeraro kiimiko.
Wasiir ka tirsan dowlada Britain oo socdaal qarsoodi ku yimid Muqdisho (Daawo Sawirro)